सफलताको कथा : च्यातिएको जुत्ता सिलाएर लगाउने प्रियंका कसरी बनिन् स्टार ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सफलताको कथा : च्यातिएको जुत्ता सिलाएर लगाउने प्रियंका कसरी बनिन् स्टार ?
बलिउडका साथै हलिउडमा पनि आफ्नो स्थान बनाउने ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपडा ३८ वर्षकी भइन् । प्रियंका चोपडाले जुन सफलता हात पारेकी छिन् त्यो हरेक युवतीका लागि प्रेरणादायी छ । उनी कसरी सफल भइन् भन्ने बारे केही रोचक तथ्य थाहा पाऔंः
प्रियंका चोपडाको जन्म जमशेदपुरमा १८ जुलाइमा भएको थियो । उनकी आमा मधु चोपडा र पिता अशोक चोपडा आर्मीमा डाक्टर थिए जसका कारण उनको विभिन्न स्थानमा ट्रान्सफर भइरहन्थ्यो । उनका पिता अब यो दुनियाँमा छैनन् । प्रियंकाले बुवाको अक्षरमा आफ्नो हातमा ट्याटु बनाएकी छिन्, जसमा लेखिएको छ, ‘ड्डाडिज लिटिल गर्ल ।’
सौन्दर्य प्रशासनमा गर्छिन् लाखौं खर्चः
एक रिपोर्टलाई मान्ने हो भने प्रियंका आफू सुन्दर देखिन हरेक महिना लगभग एक लाख भारु खर्च गर्छिन् । उनी नियमित रुपमा फोम स्किन क्लिंजर, स्किन क्रिम र चाउरीबाट बच्नका लागि आइ कन्सनट्रेटको प्रयोग गर्छिन् । साथै उनको कपाल, नङलगायतमा निकै खर्च हुन्छ ।
यी नायकसँग जोडिएको थियो नामः
प्रियंका चोपडाको नाम विवाहित नायकसँग पनि जोडिइसकेको छ । ऐतराजपछि उनको र अक्षय कुमारको लिंकअपको खबर पनि आएको थियो । यस्तै, शाहरुख खानसँग पनि उनको अफेयरको चर्चा भइसकेको छ । यसबाहेक, शाहिद र प्रियंकाकमो डेटिङको खबर पनि आइसकेको छ ।
निक जोनससँग गरिन् भव्य विवाहः
सन् २०१८ मा प्रियंका चोपडाले अमेरिकी गायक निक जोनससँग भव्य विवाह गरिन् । जोधपुरको उम्मेद भवन प्यालेसमा उनको विवाह चर्चाको विषय बन्यो ।
उनीहरुले हिन्दु र क्रिस्चियन परम्परामा विवाह गरेका छन् ।
पैसालाई महत्व दिन्छिन्ः
प्रियंका चोपडा फोर्ब्सको सूचीमा सुचिकृत हुने पहिलो भारतीय नायिका हुन् । सन् २०१८ को एक रिपोर्ट अनुसार उनको कुल सम्पत्ति श्रीमान् निक जोनसभन्दा धेरै थियो । एक अन्तरवार्ताको क्रममा चोपडाले आफूलाई पैसाको महत्व राम्रोसँग थाहा भएको बताएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘बाल्यकालमा यस्तो दिन पनि थियो कि जब हाम्रो जुत्ता च्यातिन्थ्यो तब नयाँ किन्न सक्ने स्थिती नभएकाले जुत्ता सिलाएर लगाइन्थ्यो ।’ एजेन्सी
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्गलवार, जेठ १८ २०७८ १६:२४:०७